Dhalinyaradda Qardho oo ka Hadlay Dhismaha iyo Balaarinta Dekadda Boosaaso (dhegayso) – Radio Daljir
Dhalinyaradda Qardho oo ka Hadlay Dhismaha iyo Balaarinta Dekadda Boosaaso (dhegayso)
Seteembar 30, 2017 9:00 b 2
Qaar kamid ah dhalinyaradda Magaaladda Qardho ee Xarunta gobalka karaakr oo la hadlayeey Radio Daljir ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dhismaha iyo balaarinta dekadda Boosaaso.
Cabdi Kariim maxamad cismaan oo kamid ah Dhalinyarada kunool Qardho ayaa Waraysi uu siyeey Daljir ayaa uga hadlay ku wareejinta dekadda shirkada laga leeyahay imaraadka ,isago talooyin usoo jeediyeey Madaxweynaha Puntland iyo Shacabka Puntland.
Maxamuud Fantastic ayaa Kula Kulmay Qardho diidna waraysigan ka qaaday.
Madaxweyne Ku Xigeenka Puntland oo Dahfuray Xafiiska Daryeelka La Nool Aydhiska (dhegayso)
Intisam Ali Bashi 4 years ago
Mxa ladhisaa waaba la lawaregey taas maxaqba in lawarsjiyo dakada bosaaso
Dadku wacyi galin bay ubaahanyihiin, Talyaanigaa bilaash noogu dhisaya ayuu kuleeyahay wiilkan aad waraysanayseen, Somalidii waxay noqdeen Dad wax walba rumaysanaya, Talyaanigu haduu wax dhisayo Wuxuu dhamaystiri lahaa Garoonka Bosaso oo uu Wajiyadii dhinaa kudari lahaa.
Somali iyo war aan sal iyo raadtoona lahayn maxaa kala haysta